बाबुरामले पार्टी छाड्नु अघी १ जनालाई मात्र फोन गरेर जानकारी दिए.. को हुन् ति व्यक्ति? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Politics बाबुरामले पार्टी छाड्नु अघी १ जनालाई मात्र फोन गरेर जानकारी दिए.. को हुन् ति व्यक्ति?
Domain Registration Nepal प्रकाशित समय 11:01:00 AM
असोज ९, काठमाडौँ – एकीकृत नेकपा माओवादी परित्याग गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै थिए । काठमाडौंको इन्द्रेणी कम्पलेक्समा एक्लै देखिएका बाबुरामले आफ्ना पक्षका कुनै नेतालाई पनि पार्टी परित्याग गर्न लागेको कुरा जानकारी गराएका थिएनन् । मात्र एक जना नेता बाहेक ।
भट्टराई पक्षधर मानिने एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई बाबुरामले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्न लागेको कुरा १५ मिनेट अगाडि मात्रै जानकारी गराएका थिए ।
भट्टराई पक्षधर नेता रायमाझीले भने- ‘बाबुरामजीले मलाई कार्यक्रम शुरु हुनुभन्दा १५ मिनेट अघि मात्र फोन गरेर जानकारी गराउनुभयो । वहाँले फोन गर्दै के गरौं भन्नुभयो । मैले किन पहिले जानकारी गराउनुभएन भनेर सोध्दा तपाईंहरुले रोक्नुहुन्छ भनेर मैले नभनेको हुँ । मैले अगाडि भनेको भए त तपाईंहरु मलाई परित्याग गर्नु दिनुहुँदैन भन्ने थाहा थियो ।’